Jawaar Maxmed Oo Farriin Culus U Diray Soomaalida Itoobiya – somalilandtoday.com
(SLT-Addis Ababa)-Jawar Maxamed oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qoomiyadda Oramada Itoobiya islamarkana ka mid ahaa dadkii horkacayay dibadbaxyadii Itoobiya ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda gobolka Soomaalida Itoobiya.
“Waxaan ku boorrinayaa walaaleheena Soomaaliyeed arrimaha gudihiina ah ha la soo aadina Oromada ,meelna arrimihiina ha geynina,midnimada Soomaalida waa xuquuq ay Soomaalidu leeyihiin ,inagu waxaan nahay walaahiin lakiin banaanka ayaan ka joognaa arrimaha Soomaalida quseeya,waan idin imaan karnaa oo idin dhexdhexaadin karnaa haddii aad na casuuntaan ,balse waanadeydu waxay tahay dhibaatadiina ha ku xalinina meel ka baxsan gobolka Soomaalida,”ayuu yidhi Jawaar.
“Qiyaastii 60 % ilaa 70% Miisaaniyadda Deegaanka Soomaalida waxay aadi jirtay jeebka genaraalada EPRDF maanta dhaqaalahaas gudaha ayuu yaalaa qeybsada ee ha ku dagalamina”, ayuu yidhi Jawaar Maxamed.
“Markii aan yaraa waxaan maqli jiray in gobolka Soomaalida uu yahay mid qaleel ah oo dhul saxaro ah ,markii aan hadda eeganaya waa mid ka mid ah dhulka ugu qanisan ,macaluusha iyo abaarta ka jirta gobolka Soomaalida waa mid ka timid musuqmaasuq iyo maamul xumo”, ayuu yidhi.
“Midnimada Soomaalida waxaa lagu damaanad qaadi karaa oo kali ah danaha Soomaalida ee gudaha Itoobiya iyo meelaha ka baxsan,marka codsigeygu waxa uu yahay ka fedaraal ahaan iyo ka dimuqraadi ahaan waa idinku garab istaagaynaa doorasho u dhacda xaq iyo xor ,balse idin ma faragalinayno arrimaha gudaha soomaalida,arrimaha Soomalaida waa kuwa u yaala hogaanka somaalida, .”ayuu yidhi Jawaar.